बाहना हैन तीव्र चाहना राखौँ : एस.पी उप्रेती - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column बाहना हैन तीव्र चाहना राखौँ : एस.पी उप्रेती
कुनैपनि कुरा प्राप्तिको अकाट्य सोच हुनु नै तीव्र चाहना हो । त्यही चाहना प्राप्त गर्ने योजनावद्ध रुपरेखा चाहिं लक्ष्य हो । जस्तै बच्चाले रोएर आफ्नो भोक प्यास मेट्ने चाहना पूरा गर्छ । त्यो रुवाई सम्म पुग्नुको अर्थ हो तीव्र चाहना । त्यस्तै आफूलाई मन परेको कुराहरु प्राप्त गर्न विभिन्न हर्कत प्रस्तुत गर्छन् बच्चाहरुले । यी सबैको कारण हो, केही कुराप्रतिको गाढा प्रेम । याद राख्नुस्, जब केहीमा अगाध प्रेम जोडिन्छ, तब त्यो तीव्र चाहना बन्छ ।
मानिसले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार हो, तीव्र चाहना अर्थात प्यासन । हामी सबैको जीवनमा प्यासन वा बर्निङ्ग डिजायर हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । आफू जुन क्षेत्रमा घण्टौँ, हप्तौँ मजाले खुशीले टिक्न सक्छौँ , त्यही क्षेत्र नै हाम्रो प्यासन हो । अझ भनौँ आफ्नो प्यासनमै टेकेर नै सफल हुने हो । हामीले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा काम गर्दा काम नै मनोरञ्जन बन्छ । जसबाट खुशी प्राप्त हुन्छ । अनि जहाँ आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, त्यहाँ खुशी प्राप्त हुन्छ । जहाँ खुशी साथ कर्म गरीन्छ, त्यसको परीणाम पनि सुखदायी बन्छ । मानिस खुशी प्राप्तिका लागि जीवनभर भौतारिन्छ । यद्यपि उसले खोजेजस्तो खुशी भने प्राप्त गर्दैन । हामीले बुझ्न जरुरी छ कि आफ्नो प्यासनमा काम गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी खुशी त्यहीँ प्राप्त हुन्छ ।
कतिपय मामलामा आफ्नो रुचिमा तुरुन्तै हामफाल्न नसकिएला । यसो गरेमा घातक पनि हुन सक्ला । त्यसबेलामा कस्तो निर्णय लिने त ? आफू जहाँ छौँ, जे गर्दैछौँ त्यसैलाई प्रेम गर्नुप¥यो । त्यसैलाई रुचि बनाउनुप¥यो । आफ्नो वर्तमानको उपलब्धिलाई नै निरन्तरता दिऊँ । अनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिामा सानो पाइला के कसरी चाल्न सकिन्छ । थालनी गरीहालौँ । हामी हाम्रो सिमीतता भन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अलिकति बढी सोच्नुप¥यो । अलिकति बढी पढ्नुप¥यो । अलिकति बढी लेख्नुप¥यो । अलिकति बढी काम गर्नुप¥यो । यसैले अलिकति बढी परीणाम दिने हो, होइन त ?
एकदमै व्यवहारिक भएर सोचौं । घरको भान्सामा के पकाउने देखि लिएर युद्धमा समेत लक्ष्य चाहिन्छ । योजना चाहिन्छ । सपिङ गर्नदेखि देश चलाउन लक्ष्य चाहिन्छ भने के हाम्रो जीवनलाई अघि बढाउन, सफल बनाउन लक्ष्य चाहिदैन ? तीव्र चाहना, प्यासन हुनुप¥यो । प्यासनलाई, रुचिलाई ठम्याउनुप¥यो । आफ्नो रुचिको काम गर्दा थकानको महसुस हुँदैन । आफै हौसला बढाउँछ रुचिले । जोश जाँगर बढाउँछ । अनि हामी त्यही निरन्तर जोश जाँगर र उत्प्रेरणाले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
कुनै राजाको दरबारमा कुकुरलाई पाल्ने योजना बनाइयो । विभिन्न प्रतियोगिता गराएर छनोट भएको कुकुर दरबारमा ल्याइयो । कुकुरलाई मिठो खाना, सुसार र तालिम लगायत गरेर लाखौँ खर्च गरेर पालियो । एकदिन दरबारको बगैँचामा मृग पस्छ । राजालाई मृगको मासु खान मन लागरे मृग मार्न दरबारको कुकुर खटाइन्छ । कुकुरले मृगलाई धेरै लखेट्छ तर पनि मृग मार्न सक्दैन । मृग दरबारको घेरा तोडी भाग्छ । बाहिर बसेको भुस्याहा कुकुरले मृग देख्छ र खेदेर मारेरै छोड्छ । आफूले यति धेरै खर्च गरेको कुकुरले मृग नमारेको तर भुस्याहा कुकुरले मृग मारेको प्रति राजाले मन्त्रीसँग सोध्छन् ,” त्यत्रो खर्च गरेर पालेको कुकुरले मृग मार्न सकेन तर भुसिया कुकुरले कसरी मार्न सक्यो ?” । मन्त्रीले भन्छन्, “महाराज दरबारको कुकुर अरुको भोकका लागि, अरुको ईच्छा, लक्ष्यको लागि काम गर्दै थियो तर भुस्याहा कुकुर आफ्नो भोकका लागि, आफ्नो ईच्छाको लागि काम गर्दैथियो । कुनै काममा सफलता पाउन आफैँ नै भित्रैदेखि उत्प्रेरित हुनुपर्छ ” ।
आफैलाई सोधौँ कि हामी जे जे गर्दैछौँ त्यो के का लागि गर्दैछौँ ? कसका लागि गर्दैछौँ ? यदि जवाफ पक्का पनि आफ्नो भोकको लागि । आफ्नो महान लक्ष्यका लागि हो भने हाम्रो पनि सफलता निश्चित छ । जो जो अहिले सफल छन्, महान छन्, उनीहरु तपाइ हाम्रो उमेरमा लगभग हामी जस्तै थिए । तर उनीहरुले आफ्नो प्यासनलाई रोजे । आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट बनाए । केका लागि कस्तो संघर्ष गर्ने भन्नेमा एकदमै प्रष्ट भएर निरन्तर लागिरहे । त्यसकारण आज उनीहरु संसारका लागि प्रेरणा बनेका छन् । चाहे नेपालका सफल कलाकार हरिवंश आचार्य हुन् वा साहित्यकार झमक घिमिरे । विनोद चौधरी हुन् वा अनिल शाह । बलिउडका रजनीकान्त, साहरुख खान हुन् वा अमिताभ वच्चन । नेपालका गिरीजाप्रसाद कोइराला हुन् वा प्रचण्ड । यी सबैले आफ्नो लक्ष्यमा काम गरे ।
हामीले कसैको अदर्शमा मात्रै बहकिनु छैन । हल्लामा मात्रै चल्नु छैन । आफ्नो प्यासनको लागि, लक्ष्य प्राप्तिको लागि कसरी के गर्न सकिन्छ ? आजैदेखि सोचेर योजना बनाएर अघि बढौँ । याद राख्नुस्, हिड्नेहरु गन्तव्यमा जरुर पुग्छन्, ढिलो वा चाँडो । यदि सबै कुरा ठीक छ हिँडिरहेका छौँ तर गन्तव्यमा पुग्न ढिलो भएमा धैर्यताको साथ हिँड्नु पर्छ । होइन भने प्रक्रियामा फेरबदल गर्नुपर्छ । तब पनि भएन भने कतै हाम्रो छनोट नै त गलत छैन ? महसुस गर्नपर्छ ।
यदि हामी आफ्नो क्षेत्रमा सफलता चाहन्छौँ भने पहिलो सुत्र हो, दृढ लक्ष्य बनाउनु । लक्ष्य आफ्नो प्यासन अनुसारको भयो भने काम गर्दा रमाइलो महसुस हुन्छ र अघि बढ्न सहज हुन्छ । लक्ष्य भयो भने हामीलाई प्रत्येक पलमा घचघच्याउँछ । सचेत बनाउँछ । त्यसकारण लक्ष्य अनिवार्य छ । अर्काे पाइला भनेको आफ्नो सपना प्राप्तिका लागि तत्कालै के गर्न सकिन्छ ? सुरुवात गरीहाल्ने । समय नपर्खने यसरी प्रक्रियमा लाग्दा कहिलेकाहीँ गर्न सक्दिन कि जस्तो लाग्यो भने आफैँले आफैँलाई सचेत बनाउने । आत्म-मूल्याङ्गकन गर्ने । आफूलाई शक्तिशाली विचार र भावले स्वसुचना दिने । जस्तै म जे पनि गर्न सक्छु । यसले हाम्रो आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढाउँछ । अनि अघि बढ्न मद्दत पुग्छ ।
Previous﻿स्यामुल जनसनका प्रेरक भनाइहरु
Nextआफूलाई आफ्नो लक्ष्यमा कसरी केन्द्रित गर्ने ? ५ टिप्स